मोदी फेरी सत्तामा आउलान ? सुरुवाती नतिजा एनडिएको पक्षमा | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more मोदी फेरी सत्तामा आउलान ? सुरुवाती नतिजा एनडिएको पक्षमा
मोदी फेरी सत्तामा आउलान ? सुरुवाती नतिजा एनडिएको पक्षमा
जेठ ९ गते, २०७६ - ०९:३२
एजेन्सी । लोकसभा चुनाव २०१९ बाट को बन्ला बाहुबली ? के फेरि पनि मोदी सरकार कै बहार आउला ? जसको उत्तर छिट्टै आउनेवाला छ । आजदेखि सुरु भएको भारतीय आम चुनावको मतगणनाले पाँच वर्षको लागि नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने कुराको तय गर्नेछ ।
धेरैजसो एग्जिट पोलको नतिजाले फेरि पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै अगुवाईमा एनडीए गठबन्धनले जित्ने सम्भावना देखाइएको छ । विपक्षीले यहीबीच आफुँले जित्ने दावा पनि गरिरहेका छन् ।
लोकसभा चुनाव २०१४ मा भाजपाले एकलै २८२ सिट ल्याएको थियो । त्यसबेला कांग्रेस ४४ सिटमा सिमित हुन पुगेको थियो । यस चुनावमा कसले पल्लाभारी ल्याउया ? त्यो त तय भइसकेको छैन् । तथापि छिट्टै नै नतिजा सबैको सामुन्ने आउने छ । भारतीय चुनाव आयोगले जनाएअनुसार अन्तिम नतिजा बिहिबार राती दसबजेसम्म आउने छ ।
लोकसभा चुनावको लागि ५४२ संसदीय सिटमा भएको मतदानको गणना आजबिहान आठबजेदेखि सुरु भएको छ । चुनाव ११ अप्रिलदेखि १९ मईसम्म सात चरणमा सम्पन्न भएको थियो । अहिलेको लोकसभाको कार्यकाल तीन जुनमा समाप्त हुँदैछ । यस चुनावमा करिब ९० करोड मतदाता थिए । ९० करोड मतदातामा ६७ प्रतिशत मतदाताले चुनावमा भोट हालेका छन् ।
सुरुवाती नतिजा एनडिएको पक्षमा आउँदै
मतगणना सुरुवातमै सत्तारुढ एनडीएले अग्रता लिएको छ । मतगणना भएको करिब डेढ घण्टाको अवधिमा ९२ स्थानमा अग्रता लिएको छ । युपिए गठबन्धनले ३६ स्थानमा अग्रता लिएको छ । अन्यले २२ स्थानमा अग्रता लिइरहेको देखिएको छ ।
जेठ ९ गते, २०७६ - ०९:३२ मा प्रकाशित